Mormiin karoora Maaster pilaanii Finfinnee irratti taasifamu cimee itti fufuu qaba jedhame. - OMN
OMN:Oduu Onk 18,2015 Paartiin Koongireensii Federalawa Oromoo har’a magaalaa Finfinneetti dhimma maaster pilaanii Finfinnee irratti marii hawaasaa gaggeesseera. Marii hawaasaa kanarratti bakka bu’oonni Paartii kanaa godinaalee Oromiyaa hundumaarraa bakka bu’uun irratti argamaniiran. Mariin kunille ijannoo tokkoon, uummanni Oromoo Maaster pilaanii Finfinnee dura dhaabachuun akka irra irra jiraatu walii gaaluudhaan, ibsa ijannoollee bafachuun mariin kun raawwateera.
Raashiyaan haleellaa Siriyaa keessatti gaggeessaa jirtu, lammiiwwanshii morman.
Gaaffii fi Deebii Obbo Quubsaa sabaa Waliin taasifame kutaa xmuraa